Ogaden News Agency (ONA) – Gudoomyaha Hogaanka Arimaha Dibadda oo Socdaal ku Tagay Kambodiya
Gudoomyaha Hogaanka Arimaha Dibadda oo Socdaal ku Tagay Kambodiya
Posted by ONA Admin	/ August 15, 2014
Waxaa Bishan August 8deedii illa 9keedii ka qaybgalay wafdi JWXO ah oo uu hogaamimayo Gudoomiyaha HAD mudane Cbadiraxmaan Madey shir lagu qabtay dalka Kambodia. Waxaa caasumay wafdiga oo matalayay JWXO urur la yidhaado Machadka Daraasaadka Nabadda iyo Khilaafaadka (Centre for Peace and Conflict studies-CPCS) oo ka hawl gala Koofur Bari Asia. Wuxuuna ku saabsanayd shirka qowmiyadaha Koofur Bari Asia oo u dagaalama ayaa-katashigooda iyo xuquuqdooda aadane.
Shirka yoolkiisu wuxuu ahaa sidii cilaaqaad looga dhex abuuri lahaa Ururada aan dowliga ahayn ee hubaysan (non-state Armed groups) ee wadahadal bilaabay qaabkii ay isu kaashan lahaayeen oo ay khibradhadoo u wadaagi lahaayeen, aqoon kororsina u yeelan lahaayeen.
Shirka Waxaa lagu falanqeeyay:
Guulaha iyo caqabadaha lagala kulmay wadahadalada; caqabadaha lala kulmo kolka heshiis la gaadho; iyo casharada ka soo baxay fulinta heshiisyadii horay loo gaadhay iyo si looga faa’iidaysan karo wixii kihibrad ah ee laga bartay.
Iswaydaarsiga arrimaha lagala kulmay la hadalka dowladaha sida kaabayaasha iyo caqabadaha wadahadalada kaaliya ama horjoogsada iyo khibradaha kala duwan ee ururada ay kala kulmeen wadahadalada ay galeen, Faa’iido iyo khasaare iyo qaabka looga gudbo caqabadaha dowladuhu ay wadahadalada ku carqaldeen iyo qaabka looga gudbo ayadoon xuquuqaha la leeyahay iyo mabaadiida la aaminsan yahay aan laga tagin. Waxaa laga dooday maan-curin wadajir ah oo ku saabsan stratejiyadaha lagu horumarin karo wadahadalada, iyo dib u milicsiga qolo walba siday u sii xoojin lahayd wixii u wanaagsanaa, isla markaasna u sixi lahayd wixii ka khaldamay, si cilmiyaysana shaxda ula dhigi lahayd dowladaha , xilliyadaha wadahadalka, ka hor iyo ka dibba.
Waxaa shirka ka soo qaybgalay Khubaro ka kala timid dalalka Philippines, Malaysia, Australia, Sweden, Canada, Scotland, Maraykanka iyo Ururada kala ah: Midowga Ardada jabhadda dimuqradiga Burma( Miyanmar)- All Burma Students democratic Front(ABSDF) Jabhadda Waddaniga Djiin (Chin National Front –CNF) Burma-Myanmar, Xisbiga horusocodka ee qowmiyadda Kareeni (Karenni National progressive Party-KNPP Myanmar), Midowga Qaranka Karen (Karen Nation Union- KNU- Myanmar), Ciidanka xoreynta Shacabka ( Peoples’s Liberation Army- PLA – Nepal), Ururka Midowga Xoreynta Bataani (Patani United liberation Front- PULO (Koofurta Thailand), Jabhadda Islaamiga Xoreynta Moro ( Moro Islamic Liberation Front –MILF- Mindanao Philippines), Xisbiga Kacaanka Shaqaala (Revolutionary Worker’s Party-Mindanao RMP-M Mindanao-Philippines), Jabhadda Waddaniga Xoreynta Ogadenia (Ogaden National Liberation Front- ONLF- Ogaden vs Ethiopia) oo wafdiga uga qaybgalay uu ka koobnaa mudane Cabdiraxman Sh Mahdi iyo mudane Maxamed Cabdi Yaasin oo ah masuulin sare ee JWXO , isla markaasna ka mid ahaa Guddigii Wadahadalka JWXO.
Shirkan waxaa lagu qabtay magaalada Siem Reap oo ku caanka ku ahaa dhisma ka mid dhismaayasha adduunku caanka ka ah ee loo yaqaano Ankor Wat oo ah dhismo ka kooban boqolaal dhismo oo ay qaaruumo hore wax ku caabudi jireen oo weli sidii u dhisaan kun sano ka dib.
Machadka Daraasaadka nabadda iyo Khilaafaadka (Centre for Peace and Conflict studies-CPCS) wuxuu gacan ka gaystaa xilligan wadahadalada ka socda dalalka Myanmar( Burma) iyo Philippines. Hawl-wadeenadiisuu Waxay kaalimo kala duwan ka qaatan wadahadalada ayagoo noqda goob joogeyaal, dhexdhexaadiyeyaal, ama tababarayaal gacan siiya ururda sidii ay ugu diyaargaroobi lahaayeen ugana midho dhalin lahaayeen wadahadalada. Waxay kaloo ururada u fudeyaal sidii ay khibarad uga heli lahaayeen ururada ku hawlan wadahadal iyo khubarada ku takhasusay nabadaynta. Machadkan waa machad mar walba taageera nabadaynta, gacana siiya qolyaha ku hawlan sidii khilaafaadka Xal loogfu heli lahaa.
Waxaa kaloo JWXO ay ka soo kasbatay saaxiibo cusub, isla markaasna waxaa xusid mudda in qaddiyadda Somalida Ogadenia in maanta fagaaraha caalamka lagu xuso oo ay ka mid tahay qaddiyada adduunka xal u raadinayo.
Wakaaladda wararka Ogadenia-WWO (Ogaden News Agency-ONA).